Iincwadi Iincwadi zeClubs kunye neeklasi
Iintlobo ngeeNqweno zeQela
Ukukhethwa kweebhola zebhuku kubalulekile, kodwa ngeencwadi ezininzi ezifumanekayo kunye neendidi ezahlukeneyo zamaqela, unokuqiniseka njani ukuba isincomo sinokulungela ibhola lakho lencwadi? Izintlu zinconywa ziquka iinkcazo zoluphi uhlobo lweqela eliya kulufumana iincwadi.
Incwadi yoLwazi lweNcwadi yoNyaka yeNcwadi yoNyaka
Ukuba iqela lakho lencwadi liyakuthanda ukufunda iindidi ezininzi zeencwadi ezidumileyo, zombini ubuxoki kunye nokungafani, zama olu luhlu lokufunda ibhola yencwadi yonyaka omnye . Le isampulu yezinye iincwadi ezithathiweyo kunye neeklabhu zeencwadi kule minyaka embalwa edluleyo. Kaninzi "
I-Oprah yeNcwadi yeeNcwadi zeKlabhu
Ibali likaEdgar Sawtelle nguDavid Wroblewski. HarperCollins
U-Oprah Winfrey wathatha iiklabhu zeencwadi kwizinga elitsha xa waqalisa i-Oprah's Book Club ngo-1996. Ukususela ngoko, uye wabonisa iincwadi ezingaphezu kwe-60 kwiqela lakhe kunye nentetho yakhe . I-Oprah yeNcwadi yeeKlabhu zeNcwadi yeeNcwadi ezivela kwizinto ezifihlakeleyo eziya ku-classics ukuya kwiimemori. Ukuba uxabisa imbono ka-Oprah okanye ufuna ukufunda iincwadi ezininzi eziye zafunda, khangela le uluhlu olupheleleyo lwee-Club ze-Oprah zeClub . Kaninzi "
Ukubulala i-Mockingbird nguHarper Lee. Harper Perennial
Ibhulobhu yencwadi yindawo enhle yokufunyanwa ekufundeni iincwadi zakudala omele ufunde kuzo esikolweni esiphakeme okanye kwiikholeji. Ukuvuma: Ndiyifumene esikolweni esiphakeme nakwiikholeji nge-degree kwisiNgesi kwaye ndingazange ndinikezelwe ukubulala i-Mockingbird ! Ndiyifunda okokuqala ngqa nebhulabhu yam ncwadi. Ukuba iqela lakho lencwadi lifuna ukucoca kwezinye iiklasi, qwa lasela iincwadi ukusuka kwisihlomelo sokufunda ihlobo ehlobo zasehlobo . Kaninzi "
Indlu eTyar Beach ngeHelene Cooper. Simon & Schuster
Ngelixa ezininzi iincwadana zencwadi zijolise kwiingcamango, imemori ingaba yindlela yokuzonwabisa yokufunda ngabantu okanye iziganeko zembali. Ingaba iqela lakho lencwadi lifuna utshintsho lwezantya okanye ligqibe ukufunda ukungafihli kwexesha, le miememo ekhuthazayo yindawo efanelekileyo yokuqala. Kaninzi "
Ukhetho lweNcwadi ngeNyanga
Umlilo kwiGazi ngu-Irene Nemirovsky. Uhlobo
Ezinye iincwadi zinesimo okanye ithoni ehambelana nonyaka. Ukuba unayo inyanga ethile xa ulawula umsebenzi wokukhetha iklabhu yakho, zama ukukhetha incwadi eya kugxininisa ixesha lonyaka.
Iincwadi ezilungileyo kakhulu zokufunda kwiBusika
UkuHlalwa kweNxweme yeSikolo
Iingcebiso zeClubs zamaKlabhu zamaKristu
Indawo yokuCoca ngeCorrie Ten Boom. IBlue Publishing Group
Ngamanye amaxesha abantu baye bandicela iincwadi eziya kubanceda baxoxe ngendlela ubomi kunye nokholo kuhamba ngayo. Olu luhlu lweengcebiso zebhulabhu yeencwadi ze-Christian ziquka iincwadi ezingabonakaliyo kunye nezingabonakaliyo ukuba amaqela angamaKristu angakujabulela ukuxoxa.
Egazini leCold by Truman Capote - Imibuzo Yeengxoxo zeKlabhu yeNcwadi
'I-Invention of Wings' nguSue Monk Kidd - Imibuzo Yemibuzo
"Mangaliswa" yiRJ Palacio-Book Club Imibuzo Yemibuzo
'Ihotele kwiNgqungquthela yokuBumba kunye neNgcono' yeClass Club Imibuzo
Kukho izizathu ezingapheliyo zokutyelela iThala leeNcwadi zaseKhaya
Ubomi Bokufihla Inyosi nguSue Monk Kidd Imibuzo Yokuxoxa
Indlela Yokuqala Nokugcina Iqela Leencwadi
'Ubomi bePi' nguYann Martel - Imibuzo yeeNkcazo zeClub
'I-Shack' kaWilliam P. Young - Imibuzo Yengxoxo Yenqila Yencwadi
UYanus, uThixo oBini-mbini
Njani i-Circus Elephants Ngamaxesha amaxesha ixhatshazwa ngabaqeqeshi babo
Izixhobo eziPhambili zeCanoe
Iingcaphuno ezivela kwiNveli yeNgcaciso 'Hayi, eBhabhiloni'
Imiba e-6 engqongileyo yendalo
Uvavanyo loLonwabo lwangaphandle lubonisa ukuBaluleka kokuFundiswa kweMigangatho kwiminyaka emine edlulileyo
I-Alamu yase-Alabama ne-Y
Indlela yokukhipha ibhola yePlaw Point Pen Ink
Ngaba Ndingumdala Kangakanani Ukuqala Ukunyuka Kwetwala?
UMat Maher Udliwano-ndlebe
Projekthi zeCramas Craft
Ukwahlula iMonomials kwi-Basic Algebra
Iikholeji eziphezulu zeTennessee
ImiGaqo yokuHlulwa kweNombolo yokuXhoxiswa
I-'Sandrabagger 'yaba yiKota yeGalofu njani?
Isiqhamo seNyukliya Inkcazo kunye nemizekelo
Cahokia (iU.SA) - Isikhulu esikhulu se-Mississippian kwi-American Bottom